အိပ်မက်ထဲမှာ မြွေတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါ ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ နိမိတ်များ ၁။ မြွေကို ကြောက်ပြီးထွက်ပြေးတယ်လို့ အိပ်မက်မက်တဲ့အခါ အိပ်မက်ထဲမှာ မြွေက ကိုယ့်ကို ကိုက်တော့မယ့်ပုံစံ၊ ပေါက်တော့မယ့်ပုံစံနဲ့လိုက်လာလို့ ကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးရတယ်လို့ အိပ်မက်မြင်မက်တယ်ဆိုရင်သင့်ထံသို့ ကံမကောင်းတဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုမကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မှာလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် ၂။ မြွေနဲ့ တရင်းတနှီးကစားနေရတယ်လို့ မြင်မက်လျှင် သင်ဟာပြင်ပမှာတော့ မြွေကိုသေမလိုကြောက်ပေမယ့် အိပ်မက်ထဲမှာမြွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စွာကစားနေတယ်လို့ မြင်မက်တယ်ဆိုရင် သင်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတဲ့ ပြဿနာတွေရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုရှာတွေ့ပြီးမကြာခင်ဖြေရှင်းနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် ၃။ မြွေအရေခွံလဲတာကို သင်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရတယ်လို့ မြင်မက်လျှင် အိပ်မက်ထဲမှာ မြွေတစ်ကောင်အရေခွံလဲနေတာကို သင့်မျက်စိရှေ့မှာမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ရတယ်ဆိုရင် မကြာခင်အချိန်မှာသင့်ထံသို့ ကောင်းသော ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲမှုတွေရောက်လာတော့မယ်လို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် ၄။ မြွေကို သတ်ရတယ်လို့ အိပ်မက်မြင်မက်လျှင် အိပ်မက်ထဲမှာသင်ကိုယ်တိုင်မြွေကို သတ်လိုက်ရတယ်လို့ အိပ်မက်မြင်မက်လျှင် သင့်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲဆုံးပြဿနာတွေကို ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ ကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး …
မိန်းကလေးတွေသိထားရမယ့် အကြောင်းအရာဖြစ်လို့ ကျော်မသွားပဲ ဖတ်ကြည့်ပါ
မိန်းကလေးတွေသိထားရမယ့် အကြောင်းအရာဖြစ်လို့ ကျော်မသွားပဲ ဖတ်ကြည့်ပါ အဝတ်လဲခန်းထဲမှာ hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) တပ်ဆင်ထား/မထား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။အဝတ်အထည်စတိုးဆိုင်ကြီးတွေနဲ့ ပလာဇာတွေရဲ့ အဝတ်အစားလဲခန်း (အဝတ်အထည်အသစ်တွေကို စမ်းသပ်ဝတ်ဆင်ကြည့်တဲ့အခန်း) တွေမှာ မသမာသူတွေက hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) တွေ တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကင်မရာတွေဟာ သေးငယ်လွန်းတာကြောင့် ဘယ်နားမှာတပ်ဆင်ထားလဲဆိုတာ တော်ရုံတန်ရုံ မသိနိုင်ပါဘူး။ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းကတော့ မိမိမှာပါလာတဲ့ mobile phone နဲ့စမ်းသပ်တဲ့နည်းပါပဲ။ 1. အဝတ်လဲခန်းထဲကိုမဝင်မီ မိမိဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု လုပ်လို့ရမရ စစ်ဆေးထားပါ။ 2. အဝတ်လဲခန်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါ မိမိရဲ့ mobile phone ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်ကြည့်ပါ။ 3. …
ပြန်ပေးဆွဲခံရတယ်လို့ လိမ်ညာပြီး အဖေဆီကနေ ခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်းခဲ့တဲ့ ညီအစ်မ ၃ ယောက်ရဲ့အဖြစ် တချို့လူတွေက ငွေကို လောဘကြီးတာကြောင့် မလုပ်သင့်တာတွေကို လုပ်မိကြပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံက ညီအစ်မ သုံးယောက်ကတော့ ငွေကို မကြံကောင်းမစည်ရာ ကြံစည်မိလို့ ရဲဖမ်းတာ ခံလိုက်ရပါတယ်။ သူတို့ ညီအစ်မသုံးယောက် ပြန်ပေးဆွဲခံရတယ် လို့ လိမ်ညာပြီး အဖေဆီကနေ ငွေပြန်ညှစ်တာပါ။ သူတို့အဖေက ရဲကို တိုင်လိုက်တဲ့အခါ ၃ ယောက်လုံးအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တုန်းက အသက် ၂၅ နှစ်ကနေ ၃၂ နှစ်အရွယ်ကြား ရှိကြတဲ့ ညီအစ်မသုံးယောက်က သူတို့ပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်ရလို့ ငွေနဲ့လာရွေးပါလို့ အဖေကို ဖုန်းဆက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက် ၆၆ နှစ်အရွယ်အဖေက …
ဖုံးကွယ်ရမဲ့နေရာ တခါက အမျိုးသမီး ရေချိုးခန်း တခုမှာ မီးလောင်တော့ အထဲမှာ ရေချိုးနေတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ဝရုန်းသုန်းကား ဖြစ်ပြီး အပြင်ကို အဝတ်ဗလာနဲ့ ထွက်ပြေးလာခဲ့ ကြတယ် ။ အဲ့ဒါနဲ့ အမြင် မတော်တဲ့သူ တယောက်က.. ” ဟဲ့.. ဟဲ့.. အမြန် ဖုံးကြလေ ” လို့.. အော်ဟစ်ပီး သတိပေး ရှာတယ် ။ ဒါမေယ့် ခက်နေတာက.. အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရှက်က သုံးနေရာ ရှိလေတော့ အားလုံးက ဘာကို ဖုံးလို့ ဘာကို ကွယ်ရမှန်း မသိပဲ ပြာယာ ခတ်နေကြ ရှာတာပေါ့။ အဲဒီ အချိန်မှာပဲ အန်တီကြီး …